Iwu Nzuzo - N'ogbe ndi choro ahia maka mmanu di nkpa | AromaEasy
Nkwupụta Nzuzo a na-akọwa otú Shenzhen AromaEasy E-commerce Co., Ltd (“AromaEasy” “anyị,” “anyị,” ma ọ bụ “nke anyị”) si na-anakọta, na-eji, na-ekpughe ozi nkeonwe gị na ọrụ ya na AromaEasy ecommerce platform. .
Ozi nkeonwe bu ozi nke apuru iji gosiputa gi. Ozi nkeonwe gụnyekwara ozi na-amaghị ama nke jikọtara ya na ozi enwere ike iji iji gị mara ma ọ bụ na-abụghị. Ihe omuma nke onwe ya agunyeghi ozi nke akpochapu ma obu tinye onu ya ka o ghara inwe ike ime anyi, ma ya na ozi ndi ozo ma obu ozo, ichoputa gi.
Anyị ga-anakọta ma jiri ozi nkeonwe dị mkpa iji gbasoo ọrụ iwu anyị yana iji nyere anyị aka ịchịkwa azụmaahịa anyị ma nye gị ọrụ ịchọrọ.
Anyị na-anata gị ozi mgbe ị debanyere aha na saịtị anyị, tinye iwu, denye aha akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ zaghachi nyocha.
Mgbe ị na-agwa ma ọ bụ na-edebanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, enwere ike ịgwa gị ka ịbanye ozi ndị a: aha gị, adreesị ozi-e, adreesị nzipu ozi na akara ekwentị. May nwere ike however nwere ike ịga na saịtị anyị na-enweghị aha.
Anyị na-eji ozi ị nyere anyị maka ebumnuche akọwapụtara nke ị na-enye ozi ahụ, dị ka ekwuru n'oge nnakọta, yana iwu dị ka o si dị. Enwere ike iji ozi anyị nara n'aka gị n'ụzọ ndị a:
● iji hazie ahụmịhe gị (ozi gị enyere anyị aka ịzaghachi mkpa gị n'otu n'otu)
● Iji mee ka weebụsaịtị anyị na ahụmịhe ịzụ ahịa gị dịkwuo mma (anyị na-agbasi mbọ ike iji welite onyinye nrụọrụ weebụ anyị dabere na ozi na nzaghachi anyị natara gị)
● Iji kwalite ọrụ ndị ahịa (ozi gị na-enyere anyị aka ịza ajụjụ ọrụ ndị ahịa gị na mkpa nkwado ndị ọzọ).
Hazie azụmahịa tinyere ịkwụ ụgwọ ego gị yana ịnapụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ zụrụ azụ achọrọ. Iji duzie asọmpi, nkwalite pụrụ iche, nyocha, ọrụ ma ọ bụ atụmatụ saịtị ndị ọzọ
Ka izipu ozi oge. Enwere ike iji adreesị ozi-e ị nyere maka nhazi nhazi, iji zitere gị ozi dị mkpa na mmelite metụtara usoro gị, na mgbakwunye na ịnata ozi ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ, mmelite, ngwaahịa metụtara ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg.
Ntọala iwu maka nhazi ozi nkeonwe
Ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara European Economic Mpaghara ("EEA"), nhazi anyị gbasara ozi gị ga-esite na ihe ndị a: Ruo ókè anyị nwetara nkwenye gị maka nhazi ozi gbasara gị ga-abụ ihe ziri ezi dị ka Nkeji edemede 6 (1) udo. (a) nke General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Ọ bụrụ na nhazi ozi nkeonwe gị dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke nkwekọrịta n'etiti anyị na anyị ma ọ bụ maka ịme usoro tupu ịmalite ọrụ gị, arịrịọ dị otú a ga-adabere na GDPR Article 6 (1) lit. (b). N'ebe nhazi dị mkpa ka anyị wee dobe ọrụ iwu, anyị ga-ahazi ozi nkeonwe gị dabere na GDPR Article 6 (1) lit. (c), ebe ebe nhazi dị mkpa maka ebumnuche anyị ziri ezi, a ga-eme nhazi dị otú ahụ na GDPR Article 6 (1) lit. (f).
Biko mara na ebe iji nkwenye gị maka nhazi ozi nkeonwe gị ị nwere ike iwepu nkwenye gị, dịka ọmụmaatụ site na izipu ozi ịntanetị na [email protected] n'oge ọ bụla nke ndọrọ ego agaghị emetụta iwu nke nhazi ọ bụla emeburu na ndabere nke nkwenye gị.
Anyị na-eme usoro ezi uche dị na ya iji hụ na ozi gbasara gị ziri ezi, zuo ezuo ma ọ bụ ruo ụbọchị. I nwere ikike ị nweta, dozie ma ọ bụ hichapụ ozi nkeonwe anyị na-anakọta. I nwekwara ikike igbochi ma ọ bụ jụ, n'oge ọ bụla, ịga n'ihu na ozi nkeonwe gị. I nwere ikike ịnata ozi nkeonwe gị n'usoro a haziri ahazi na nke ọkọlọtọ yana, ebe teknụzụ ga-ekwe omume, ịnyefe ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ ozugbo. Nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa na ikike nchedo data gbasara nhazi nke ozi gbasara gị.
Iji kpuchido nzuzo na nchedo nke ozi onwe gị, anyị nwere ike ịrịọ gị ozi ka ị nyere anyị aka igosipụta njirimara gị na ikike iji nweta ụdị ozi ahụ, yana ịchọ ma nye gị ozi nkeonwe anyị anyị na-echekwa. Enwere oge ufodu iwu ndi ozo ma obu ochicho iwu choro ma obu choo anyi iju anyi inye ma obu wepu ihe omuma nke anyi nile anyi dobere.
Inwere ike zitere anyị ozi ịntanetị [email protected] iji ikike gị. Anyị ga-aza arịrịọ gị n'oge ezi uche. Anyị ga-eme usoro niile ezi uche dị na ya iji hụ na data nkeonwe gị ziri ezi ma ruo ụbọchị.
Are na-ahụ maka njirimara aha njirimara gị na nchekwa paswọọdụ yana nchekwa Aromaeasy. Anyị na-akwado ịhọrọ paswọọdụ siri ike ma gbanwee ya ugboro ugboro. Biko ejikwala otu ozi nbanye abanye (email na okwuntughe) gafee otutu weebụsaịtị.
Nke ahụ kwuru, anyị na-eme usoro nchekwa dị iche iche gụnyere ịnye iji ihe nkesa nchebe. A na-enyefe ozi niile dị nro / nzere nyere site na teknụzụ echekwara Socket (SSL) wee kpuchie ya na nchekwa data ndị na-eweta ọnụ ụzọ naanị ka ndị ikike ikike pụrụ iche nye sistemụ ndị a wee nweta ya, ma achọrọ ka ha debe ozi ahụ. Mgbe azụmahịa ghasịrị, agaghị edobe ozi nkeonwe gị (kaadị akwụmụgwọ, nọmba nchekwa ọha, ego na ihe ndị ọzọ) na sava anyị.
A na-enyocha sava anyị na weebụsaịtị anyị wee gosipụta nke ọma na mpụga nke McAfee Secure si Symantec kwa ụbọchị iji chebe gị n'ịntanetị.
Ee. Kuki bụ obere faịlụ nke saịtị ma ọ bụ onye na-enye ọrụ na-ebufe draịvụ kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị (ma ọ bụrụ na ị hapụrụ ya site na ntọala gị). Nke a na - enyere saịtị ma ọ bụ sistemụ ọrụ aka ịchọpụta ihe nchọgharị gị ma nwetakwa ma cheta ụfọdụ ozi.
Anyị na-eji kuki iji nyere anyị aka icheta ma hazie ihe ndị ahụ na ụgbọ ibu azụmahịa gị, ghọta ma chekwaa mmasị gị maka nleta ọdịnihu ma kpokọta data gbasara traktị saịtị na njikọ saịtị ka anyị wee nwee ike ịnye ahụmịhe saịtị na ngwaọrụ kachasị mma maka ọdịnihu.
Anyị nwere ike ịmekọrịta ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ iji nyere anyị aka ịghọta ndị ọbịa na saịtị anyị nke ọma. A naghị enye ndị ọrụ a ohere iji ozi anakọtara na nnọchite anyị belụsọ iji nyere anyị aka iduzi ma melite azụmahịa anyị. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji Google Analytics, ọrụ nchịkọta weebụ nke Google, Inc. (Google ") nyere iji nyere anyị aka ịghọta nke ọma ka ndị ọrụ si arụ ọrụ na weebụsaịtị anyị. Nchịkọta Google na-eji kuki iji nakọta ozi banyere ojiji nke weebụsaịtị anyị. A na-eji ozi a iji kpokọta akụkọ ma mepụta ọrụ iji nyere anyị aka melite weebụsaịtị anyị na ọrụ ndị metụtara ya. Akụkọ ahụ na-egosipụta usoro weebụsaịtị na-enweghị ịmata ndị ọbịa ọ bụla. Ozi nke kuki Google banyere ojiji nke weebụsaịtị anyị (gụnyere adreesị IP gị) nwere ike ibunye ma chekwaa Google na sava na United States. Google nwekwara ike ịnyefe ozi a na ndị ọzọ ebe iwu chọrọ ka ịme ya, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ a na-ahazi ozi ahụ na Google. Google agaghị akpakọrịta IP address gị na data ọ bụla ọzọ Google nwere.
Na ụfọdụ peeji nke weebụsaịtị anyị, ndị ọzọ na-enye ngwa sitere na webụsaịtị anyị nwere ike ịtọ kuki nke ha iji nye ọrụ, soro ihe ịga nke ọma nke ngwa ha ma ọ bụ hazie ngwa maka gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji bọtịnụ ịkekọrịta otu mgbasa ozi dịka Facebook ma ọ bụ Twitter, netwọọdụ emepụtara bọtịnụ a ga-edekọ na ị mere nke a. Maka etu kuki si arụ ọrụ, anyị enweghị ike ịbanye kuki ndị a, anyị enweghịkwa ike ịnweta ndị ọzọ ịnweta data dị na kuki anyị ji anyị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike họrọ ka kọmputa gị dọọ gị aka na ntị oge ọ bụla ezigara kuki, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ gbanyụọ kuki gị niile site na mwube ihe nchọgharị gị. Dị ka ọtụtụ weebụsaịtị, ọ bụrụ na ihichapụ kuki gị, ụfọdụ ọrụ anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, ị ka nwere ike itinye iwu site na ịkpọtụrụ Ọrụ Ahịa na [email protected].
Anyị anaghị ere, ahia ma ọ bụ bufee ndị ọzọ na mpụga ozi gbasara gị. Nke a anaghị agụnye ndị ọzọ tụkwasịrị obi, ndị na-enyere anyị aka ịrụ ọrụ na weebụsaịtị anyị, na-eduzi azụmahịa anyị, na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, na-ezitere gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ zụtara, na-ezitere gị ozi ma ọ bụ mmelite ma ọ bụ na-arụ ọrụ gị, ọ bụrụhaala na ndị ọzọ kwenyere idobe ozi a. Anyị nwekwara ike wepụta ozi gị mgbe anyị kwenyere na ntọhapụ kwesịrị ekwesị iji gbasoo iwu, manye ụkpụrụ saịtị anyị, ma ọ bụ kpuchido ikike anyị, ihe onwunwe, ma ọ bụ nke ndị ọzọ. Agbanyeghị, enwere ike ịnye ndị ọbịa ozi maka ozi maka mgbasa ozi, mgbasa ozi, ma ọ bụ ojiji ndị ọzọ.
Ogologo oge ole ka anyị ga-ejigide ozi gị?
Anyị ga-ejigide ozi nkeonwe gị ruo ogologo oge ọ dị mkpa iji mezuo ebumnuche ndị akọwapụtara na Iwu Nzuzo a, belụsọ ma ọ bụrụ na ụtụ isi, nkenye akaụntụ ma ọ bụ iwu ndị ọzọ metụtara ka ogologo oge njigide dị.
Biko gaa na ngalaba nke Ọnọdụ na Ọnọdụ iji gosipụta ojiji, nkwuputa na ikike nke ikike na-achịkwa iji weebụsaịtị anyị na Ọnọdụ na Ọnọdụ.
Ọ bụrụ na anyị kpebie ịgbanwe iwu nzuzo anyị, anyị ga-edenye mgbanwe ndị a na ibe a, na / ma ọ bụ melite Usoro Nzuzo Nzuzo dị n'okpuru.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji otu n’ime ikike gị dị ka akọwara n’elu, ma ọ bụ nwee ajụjụ ma ọ bụ mkpesa banyere iwu a, otu esi ahazi ozi nkeonwe gị, biko kpọtụrụ anyị site na ozi-e: [email protected]